MinnyoMaharsan: တနင်္ဂနွေ ဈေးပွဲတော် Verkaufsoffener Sonntag am 21. Juni
တနင်္ဂနွေ ဈေးပွဲတော် Verkaufsoffener Sonntag am 21. Juni
ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အထူးဈေးရောင်းပွဲတော် ရှိပါတယ်။ ဂျာမနီက ဆိုင်တွေအားလုံးဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်ပါတယ်။ လာမဲ့ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ တနင်္ဂနွေဈေးပွဲတော် အဖြစ် ဆိုင်တွေအားလုံးဖွင့်ပါမယ်။
အဲဒီနေ့မှာ Hamburg Region အတွင်းမှာရှိတဲ့ S-bahn U-bahn Bus (ရထားတွေ ဘတ်စ်ကားတွေ) အားလုံး အလကားစီးနိုင်မှာပါ။ ဘယ်သွားသွား ကြိုက်တဲ့ ရထား၊ ကြိုက်တဲ့ကား တက်စီး အခမဲ့ ပို့ပေးမှာပါရှင်။ Hamburg Region က အရမ်းကျယ်ပါတယ်။ ၂၉၂ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းတဲ့ Hamburg Region ထဲမှာ လည်စရာနေရာတွေ၊ ဈေးဝယ်စရာနေရာတွေ အလွန်ပေါများပါတယ်။ အခုလို အခမဲ့ ခရီးသွားခွင့် ပေးတာဟာ အခွင့်အရေးကောင်းပါပဲ။
ဆိုင်တွေအားလုံးဟာ နေ့လည် ၁ နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီထိ ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေး စတိတ်ရှိုးတွေလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒါတွေက
Innenstadt: ----------- Buntes Rahmenprogramm
Altona : ----------- Stadtteilfest Altonale (Altona မြို့ရဲ့ မြို့တော်ပွဲပါ။ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးရှိပါမယ်)
Bergedorf:---------- Bergedorfer Rosenfest (ဒီမြို့မှာ နှင်းဆီပွဲတော်ပါ)
Eimsbüttel:----------- Midsommarfest & Schnelsen kocht auf(fast food & fast wine တွေ ရောင်းမယ်။ နွေရာသီပွဲတော်ပါ)
Harburg :--------------Take5– Harburger Jazztage(“Take 5” Jazz တီးဝိုင်း)
Wandsbek:------------ Oldtimertreffen (ခေတ်ဟောင်းပစ္စည်းပြပွဲပါ။ ဟိုးတုန်းက နာမည်ကျော်ကားတွေ
ဒီလို ပြထားတတ်ပါတယ်။ )
Billstedt :------------Schlussverkauf mit Gewinnspiel und einem attraktiven Musikprogramm (ဈေးပိတ်ချိန်မှာ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဂီတပွဲတွေလည်း ရှိပါတယ်)
ဒီလိုဖွင့်ပွဲ လုပ်ပါတယ်။ အခုဆို နေ့တိုင်း ဒီအဖွဲ့တွေ လေ့ကျင့်နေကြပါပြီ။ ကျွန်မ နေတဲ့ အဆောင်က Rathaus ရှေ့မှာဆိုတော့ မနက်တိုင်း ဘင်ခရာ လေ့ကျင့်နေတာ မြင်ရပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ ဘင်ခရာသံနဲ့ အိပ်ရာနိုးရပါတယ်။ စိတ်တက်ကြွစရာပါပဲ။ သူတို့က တစ်ပတ်ကြီး လမ်းလျှောက်ကျင့်တာလေ။ နောက်က ရဲကား၊ ကြက်ခြေနီကားတွေပါ လိုက်ရသေးတယ်။
Hamburg ကို လည်ချင်သူများ free charge နဲ့ လည်နိုင်ဖို့ သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ပုံတွေအားလုံးကို google က ရှာယူထားပါတယ်။
Posted by မဟာဆန် at 12:01 PM
ဂျာမနီမှာ မြန်မာတွေ အများကြီးလားဗျ။
စကားမစပ် ဟိုငါတို့ရွာ ဆိုတဲ့ ပုံလေး Idea ကောင်းတယ်ဗျ။
ဟေး ဟေး ..ပျော်စရာကြီး ရထားတွေအားလုံးကို အလကားစီးလို့ရတယ်တဲ့လား ။ လာလည်ချင်လိုက်တာ။ စတုဂတ်ကနေ ဟန်းဘွတ်အထိရထားကိုလည်း အလကားစီးလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲနှော်။